बिहिवार, मंसिर १६, २०७८ १२:०८:३१ युनिकोड
६ कात्तिकमा वडा र ९ कात्तिकमा पालिका अधिवेशन हुँदै
नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशन अन्तर्गत ६ कात्तिकमा वडा र ९ कात्तिकमा पालिका अधिवेशन हुँदै छ । यसका लागि एमाले केन्द्रीय कार्यालयले पालिकामा ८ बुँदे पत्राचार गरेको छ ।
जसमा अधिवेशन गर्न सहजीकरण गर्नेदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकसाथ पालिकालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । विशेष परिपत्र भनिएको पत्रको आठौँ बुँदामा नेट सुविधा भएका वडाहरूको अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन गर्ने र पालिका अधिवेशनहरूको ७५३ वटै पालिकाको एकसाथ ओलीले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।
५. नेतृत्व चयन गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत विधि अपनाउने र यदी सर्वसम्मत नभएमात्र निर्वाचन विधि अपनाउने । निर्वाचनको लागि पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले तयार पारेको वडा÷शाखा र पालिका÷इलाका निर्वाचनसम्बन्धी सामन्य मार्गदर्शन, २०७८ यसैसाथ जारी गरिएको छ
८. वडा अधिवेशनको भच्र्युअल माध्यमबाट नेट सुविधा भएका वडाहरूको केन्द्रीय अध्यक्षद्वारा उद्घाटन र सम्बोधन गरिनेछ र पालिका अधिवेशनहरूको ७५३ वटै पालिकाको एकसाथ पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा एकसाथ सम्बोधन गरिने व्यवस्था गरिनेछ । यस कार्यको लागि लिंक ५ गते पठाइनेछ । यसको लागि सम्भव भए स्क्रिनको व्यवस्थापन गर्ने र यदी सम्भव नभए मोबाइलबाट लिंक जोडेर लाउड स्पिकरमा अधिवेशन परिसरमा अध्यक्षको सम्बोधनलाई जोड्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, कार्तिक ५, २०७८, ०२:०९:००